Iray andro taorian’ny fitsanganan’ny governemanta Ntsay Christian dia nivadika sahady ny vahoaka ka mangataka ny handravana azy. Tsy mankasitraka ny firafitra ny governemanta sy ny olona ao anatiny ny 95% ny olona sy ny fikambanana nanaovana fanadihadiana sy naneho ny heviny omaly talata faha 12 jona 2018. Tsy hay tenenina intsony ny fanehoan-kevitra avy amin’ny fitaovan-tserasera “Facebook” izay manakiana tanteraka izao famitaham-bahoaka ataon’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ingahy Hery Rajaonarimampianina ary ingahy Andry Nirina Rajoelina izao. Voaporofo hoy ny feo mandeha ankehitriny fa saribakolin’ny mpanjana-tany vaovao izy roalahy ireo, ary fitaovana amin’izany ingahy Hery Rjaonarimampianina izay filoham-pirenena ankehitriny.
Tsy ny mpanao pôlitika ivelan’ny fitondrana ihany no tezitra amin’ity raharaha ity, fa ireo depiote 73 izay Mapar (Miaraka amin’i Andry Rajoelina) sy ny TIM (Tiako Madagasikara) izay antokon’ingahy Ravalomanana Marc izay ao ambadik’izao fihetseham-bahoaka tsy nahomby izao. Porofon’izany dia mbola mitohy ny fitokonana mitaky ny fialan’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny fanjakana HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara).
Nanambara ny avy ao amin’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena omaly fa mbola mitohy ny tolona ary tsy hijanona izany raha tsy azo ny zavatra notakiana. Toa izany koa ny mpiasan’ny fiadidiana ny fananan-tany sy ny fanajariana ny tany. Mitaky minisitra mahalala tsara ny olana amin’ny fananan-tany izy ireo raha ny voalazan’ny filohany omaly ihany. Ny ministeran’ny Vola sy ny teti-bola sy ny sampan-draharaha momba ny hetra dia mbola nanamafy fa tsy maintsy miala ramatoa Sousou izay minisitra amin’izao fotoana izao. Teo amin’ny ministeran’ny Paositra sy teknôlôjia vaovao dia milaza mivantana ary nametaka sora-baventy fa tsy mila ny minisitra Maharante Jean De Dieu izy ireo, ka noho izany dia mitohy ny tolona.
Ny mpianatra ny oniversite sy ny mpampianatra mpikaroka dia nanambara koa fa mitohy ny fitokanana ary mitaky ny fialan’ny minisitra koa.
Ampahany amin’ny fitakiana omaly ireo izay manamafy fa tsy izy io fitondrana entin’ingahy Ntsay Christian io.
Tao anatin’izany rehetra izany dia mitaky ny fandravana sy ny fialan’ny ingahy Ntsay Christian sy ingahy Hery Rajaonarimampianina indray izao ny vahoaka mitady fanovana. Hita hoy izy ireo fa tsy vahaolana velively ny fanendrena minisitra vaovao io. Mbola ny HVM ihany no mandrakotra amin’izany.
Isan’ny tsy tantin’ny vavonin’ny Malagasy koa ny fandrenesana fa ny komity iraisam-pirenena sy ingahy Andry Nirina Rajoelina no nahatonga izao fanovana kitoatoa natao eto amin’ny firenena izao. Tsy azo ekena izany hoy ny feo mandeha etsy sy eroa ka dia ho hitantsika ny fihodin’ny tantara indray manomboka izao.